Cylindrical Parabolic Template – Coupon Machine Social Works
Home /Uncategorized / Cylindrical Parabolic Template
Source ::::: http://www.freeantennas.com/projects/template/
Faa’iidooyinka badan anteenooyinkooda kale sida Can Pringles ku anteeno
No Pigtail baahan yahay
No Bedelida in AP (No firaaqeynta of damaanad)
Aaddinta No (SWR) Dhibaatooyinka
No Qaybo ka iibsaday
Dhismaha Trivially Easy
Itimaalka Aad Low of Error
Sida Good As ama Performance WANAAGSAN badan Can Pringles ku anteeno
Front Sare inay dib / Front in Saamiga Rear
Wanaajinaysaa Privacy Wireless LAN
Waxay yareysaa Fara
Asal ahaan antenna tani waa si fudud in la sameeyo, laxan, iyo rakibi, oo waxay u qabata si fiican in ay tahay nacas ma in ay isku dayaan mid ka hor doorashada si aad u iibsato antenna ganacsi, haddii sabab kale ma jiro oon ahayn waxaad eegi kartaa si aad u aragto haddii aad wax iibsiga antenna ganacsi oo ku filan si ay u sameeyaan link aad rabto si ay u sameeyaan.
Waxaan loo baahan yahay iftiinta misaal in la baabi’iyo off caymiska hantida. Midkan ka meelaha qaarkood la baabi’iyo karaa signal halka hagaajinta signal meelo kale. A lix ama siddeed version inch ah ee iftiinta this waa qumman yahay oo keliya ee baabi’inta off caymiska goobta halka hagaajinta signal in si liidata “shiday” meelaha. Waxaad mid ka Pringles ah awood, waxaa loo baahan yahay wax yar si aad u hesho fanaaniinta dhigi kara. Waxaan loogu talagalay iftiinta this in lagu xiro in iaydoo dibadda la WAP-11 dhibcood ka helaan laakiin waxaa uu noqday arrin caan ah oo leh dadka dhismaha indoor LAN iyo dadka dhismaha dhibic-ka-barta links aad u gaaban u dhexeeya guryaha iyo xafiisyada sababta oo ah waxaa ka mid ah ka-qabadka iyo helitaanka fudud ( maqas, cajalad, kartoonada, bireed iyo qasacad iyo labaatan daqiiqo oo aad ku sugan tahay ganacsi). Waxay awood links si fudud dhamaystiran ilaa hal Km ag fadhiyey laba WAP-11 ee daaqadaha dhamaadka kasta oo xiriir la line nadiif ah ee goobta. version The lix inch ah antenna wuxuu ku siin doonaa 10 ilaa 12 dB faa’iido badan waxa aad leedahay. Tani waxay u dhiganta qiyaastii 27 ilaa 33 dBm of ERP. Taasi macnaheedu waa in aad dabaylaha la awood muuqata in jihada uu jacel yahay inta u dhaxaysa 500 mw iyo 2 Watts. Tirooyinkaas waxa ku xidhan aad heli dhibic, kaararka in la isticmaalo, taas oo WiFi marsho, iwm … iwm … faa’iido Taasi waxay leedahay in ay ka yimaadaan oo meel ka timaado dhinaca dambe ee iftiinta ah, xoog sida caadiga ah lagu kala qaado jihada in uu yahay ” kabsatay “weeraryahanka. Sidaas daraaddeed waxaad gacanta more of halkaas oo signal la socda marka la isticmaalayo iftiinta this. feature Taasi of antenna waxaa loo isticmaali karaa si kor loogu qaado gaarka ah ee network wireless iyo in ay ahayd aan sabab u dhigaayo in meesha ugu horeysa, inta kale ee waa uun maraq laakiin waa maraq aad u dhabta ah iyo halkii ay ka kaheli. 🙂 Fadlan sidoo kale ogow faa’iido antenna in ay dejiso kordhiyo faa’iido maxaa yeelay waxa ay ku darayaa in lagu kala qaado iyo xoogga helay labada. Sida caadiga ah faa’iido kordhiyo siyaadiyo signal la isugu gudbiyo. Waxaa ka mid ah in yar oo wanaag sameeya si loo kordhiyo signal la isugu gudbiyo marka dhibic helaan uusan awoodin in uu “maqal” card PCMCIA yar ka itaalka daran dhamaadka kale ee link.
sawirka waxaa lagu cabiraa karin mashiinka nuqul si aad u saxan ee size kasta oo macquul ah. xisaabaat The faa’iido for tirada kala duwan oo saxanka sidoo kale la siiyaa sidoo kale garaafyada xunxunna muujinaya width dogob iyo faa’iido / noqnoqoshada. iftiinta Tani waa inta jeer ee madax bannaan, taasoo la micno ah waxaa wax marsho wireless on band kasta oo shaqayn doona.
Waxaa square ah ku dul jaantuska soo dhuray. Waxay kaa caawin doona si loo hubiyo in gargaarka bani-ma musuqmaasuq ratio dhinac ee template ah. In si kale loo dhigo, haddii square weli waa square ka dib markii aad u ballaadhiyo ama la yareeyo template ah, aad weli template wanaagsan.
oo dhererkeedu wuxuu u xilsaaran kala duwan la size ee saxanka (laakiin saami) sidaas daraaddeed dhibic Payne ayaa sidoo kale muujiyey on sawiro ah. Positioning of dhibic masruufaan (dhibic focal) waa arrin ugu muhiimsan ee ku xid- saxan qoto dheer. Khaladaadka ah 1/4 “waa la aqbali karin ee mawjadaha kuwan. Waxaa ku caawin karta in” kaman “la qabto ugu khaladaad yar (~> 1/4 inch) dhaqaaqi doono barta focal yar. Haddii Dipole ma aha in barta focal, waxaad waayi doonaan faa’iido.
sidoo kale Saxanka dhishka faa’iido dabacsan haddii iftiinta dhammeeyayna ay ka qalooca saxda kala duwan badan. sawir Tani waa in ay sax ah oo ku filan in la cabiraa si size kasta oo macquul ah.
iftiinta waxaa loogu talagalay in la siiyo by Dipole ah. Taasi waa sababta ma aha wareeg ah. Dipole A waa muddo dheer oo cylindrical, barta focal on saxan wareeg ah waa wareeg ah. Nuqdada focal on design tani waa dhululubo ah. Qaar badan oo dhibcood helaan isticmaali Dipole (s) sida ay anteeno, ka WAP-11 waa mid ka mid AP sida. iftiinta Tani waa qaabka aan fiicnayn for antenna oo caynkaas ah. unugyada dhawaan More, sida qoyan-11, Ha isticmaalin dipoles sida ay antenna. Waxaan kuugu dari template ah loogu tala galay la anteenooyinkooda maanka kuwa sidoo kale.
iftiinta waxaa loogu talagalay in ay noqdaan “square”. Taasoo la micno ah in aad isticmaali doonaa xoogaa yar oo wax square in ay qaabeeyaan qalooca. Haddii aad u baahan tahay si loo yareeyo height for baakooyinka sababaha, anteeno ka gaaban shaqayn doonaa, laakiin aad waayi doonto qiyaas ahaan 3 dB for SU kasta oo height iftiinta. Waxaa kaloo muhiim ah in la isku dayo in la helo Dipole ee qarka u bartamaha iftiinta ah (fiiri kor).
Haddii aadan haysan waxaad copier ah, ama aad rabto in aad ka dhigi version a baaxad aad u ballaaran, waxa aad sameyn kartaa in aad warqad garaaf u gaar ah iyo wareejiyo qalooca gacanta. Wargeyska duubo Brown shaqeeyaa ganaax. Waxaa laga yaabaa inaad u qaaddo kasta 1/4 “block in ay 1” iyo natiijada kama dambaysta ah uu noqon doono 24 “iftiinta ah. if yar ku dhawaad 6 ama 8 inji badan yihiin wax ku ool ah ee guriga. Haddii ay helaan dhibic leedahay laba anteenooyinkooda, kaliya laba if mid waayo antenna kasta.
template waa qayb weyn laakiin samir. Xuquuqda riix image kasta oo dooro “Save Picture Sida” ama “Print Picture” … Marka aad hesho nuqul daabacan, hubiyo xirneeyn qeybiyaha on nuqul daabacan waa square. Waxaad markaa si toos ah u isticmaali kartaa image ah, sida ku cad sawirada hoose, ama aad u qaaddo laga yaabaa on copier ah, iyadoo la isticmaalayo rinjiga, ama gacanta. Waxaa laga yaabaa inaad isticmaasho template si uu u sameeyo template ah kartoonada more adag si aad u eegi kartaa dusha oo dhan aad iftiinta sida aad u qaabaynta. Haddii aad go’aansato in aad qaaddo image ee Rinjiga hubi inaad hubiso square yar barbaro on template ah. Kor uqaadista bedeli kartaa “ratio dhinac” ee image ah iyo in la abuuro lahaa template xun. Sidaas dheer sida square yar on template weli waa square ka dib marka aad dib-u-size template ah, weli aad qabto template wanaagsan. Waxaad sidoo kale go’aansan kartaa in aad isticmaasho oo kaliya qayb ka mid ah xariiqa qallooca ayaa ka template ah. Haddii aad samayn in aad weli isticmaalaan dhibic isku focal la xusaa template ah.
Front dib ratio waa cabirka ah sida ugu wanaagsan ee antenna a jiho oo diiday faragelinta ka jiho kale oo aan ahayn jihada la doonayo. iftiinta waxa uu leeyahay hore u fiican inaad dib u ratio. Front dib ratio la antenna this ku xiran tahay xajmiga silig mesh aad isticmaasho si ay u sameeyaan antenna ah. mesh dhigto dhali doono faa’iido kaliya wax yar ka wanaagsan laakiin dhali doono hore aad uga fiican inaad dib u ratio. Qaabaynta muujinaysaa ratio F / B in ay ka khayr badan ~ 25 dB haddii aad isticmaasho 1/4 “ama mesh yar noqon. Tirooyinka My faa’iido xisaabiyaa kibir iftiinta waa 55% ku ool ah. Haddii aad isticmaasho warqad adag ee aluminium ama copper sida aad iftiinta , tirooyinka faa’iido aad waxaa laga yaabaa in wax yar ka sareeya oo kuwan ka. hannaankii shucaaca waa cidhiidhi in diyaarada toosan badan diyaaradda siman. Iyada oo tirada weyn ku fiiqaya antenna u baahan kartaa daryeel.
Sidaas darteed haddii aad leedahay AP ah ee gurigaaga, dhufsan mid ka mid ah xaashiyaha cookie aad iyo aad u hesho baxay snips waxa daasadda ah =), kaliya ma is qabsatay Hooyo 🙁 Dhab ahaantii aad iftiinta this ka dhigi kartaa ka kaliya ku saabsan wax kasta. Dadka ayaa ka dhigay kuwa wanaagsan ka daasadaha Pringles, daasadaha iyo waxa daasadda badan, screen silig, sheet aluminium, iyo wax saqafka waxa daasadda. kasta oo dusha biraha guri ama screen, xataa alluminoomka ku dhejisan yihiin kartoonada shaqayn doona. Waxaad la dhiso karo mid ka mid ah in ka yar nus saac ah iyadoo la isticmaalayo ah sanduuqa kabaha jir ah oo duudduuban of-bireed iyo qasacad.
Xaqiiqdii waan jeclaan lahaa in aan ka maqalno dadka ka dhigtay mid ka mid ah maadaama ay tani ay iga caawisaa in la hagaajiyo this page.